Soo dejisan McAfee LiveSafe 14.0.4121 – Vessoft
Soo dejisan McAfee LiveSafe
McAfee LiveSafe – software caan ah antivirus oo isticmaalaa xal sare oo duurka ku ah difaaca. Software wuxuu hubinayaa ilaalinta xogta sir ah ama macluumaad kale taasi oo ka brannmur labada dhinac iyo kuwo jiilka soo socda ee muhiimka ah scanner. McAfee LiveSafe waa inay awoodaan inay ilaaliyaan joogista ee internet-ka, xannibi spam in adeegyada mail, ilaaliyo hardware iyo software. Software waxay cuskatay links natiijooyinka raadinta la astaanta gaarka ah taas oo user ku saabsan heerka khatarta ah. McAfee LiveSafe taageertaa adeega maaraynta ilaalinta qalabka user ee la isticmaalayo hawlaha ay hawshooda u ah sugida laba-yada iyo bedelkiisa oo ka mid ah sirta fudud ama soo noqnoqda. Sidoo kale software ka kooban yahay module ah waalidka gacanta ku bixiya shaandeynta ee content iyo qorshaynta ee isticmaalka gaadiidka.
Ilaalinta xogta Complex
Scan Quick nidaamka waqtiga dhabta ah
Iska Ilaalinta ee internet-ka
Warbixin ku saabsan heerka uu khatar links
Module of control waalidka
McAfee LiveSafe Software la xiriira:
English, Français, Español, Deutsch... Norton 2015 22.5.4.24 Security Premium iyo 2015 22.5.0.124 Security Delux
العربية, English, Français, Español... Tixati 2.47 Standard iyo Portable